UDkt Hae-Young Kim wase-KRISP/Africa Health Research Institute (i-AHRI).
Ukufuduka ngaphakathi ezweni eNingizimu Afrika kuhambisana nezinga eliphezulu kubantu besifazane abanegciwane lesandulelangculazi ngonyaka bebelethile.
Loku kutholakale ocwaningweni oluhlanganyelwe lososayensi base-UKZN, base-United States, nabase-United Kingdom olushicilelwe ebhukwini locwaningo i-Plos Medicine.
Ababhali abaqavile ngoDkt Hae-Young Kim wase-KRISP/Africa Health Research Institute (i-AHRI) yase-UKZN, noSolwazi Frank Tanser waseSikoleni sezobuHlengikazi nezeMpilo zoMphakathi.
Lolu cwaningo luthole ukuthi liphezulu izinga lokufa kwabantu besifazane abahamba emakhaya kodwa bahlale eNingizimu Afrika ngenkathi bekhulelwe. U-Kim uthe nakuba kwandiswe ukusetshenziswa kwemishanguzo kwancipha nezinga lokufa kwabantu besifazane, kodwa kunesidingo sokuletha izindlela zokuqonda eziyisisekelo salolu cwaningo nokuqhamuka nezindlela zabantu besifazane abafudukayo.
Lolu cwaningo lwenziwe ngenxa yokushoda kolwazi ngezindlela zokuthutha kwabantu besifazane abazithwele nemiphumela ehambisana nempilo yomama abakhulelwe.
U-Kim uthe: ‘Ukufuduka kunengozi ekwehleni kwezinga lokuzinakekela ebantwini abanegciwane lesandulelangculazi nasebantwini besifazane abanegciwane lesandulelangculazi abaqala nabaqhubeka ukudla imishanguzo ngenkathi bekhulelwe ngezinselelo ababhekana nazo ekunakekeleni abanegciwane ngenkathi yokukhulelwa okungagcina kuholele ekufeni.’
Lolu cwaningo luncike olwazini lolunye ucwaningo lwabantu olukhulu olwenziwa yi-AHRI.
Abantu ababamba iqhaza ocwaningweni ngabantu besifazane abaneminyaka esukela kwi-15 ababehlala endaweni okwenziwa ucwaningo kuyona. Ababekhulelwe ababekhona babengama-30 291 ebantwini besifazane ababamba iqhaza, abangama-3 339 babehaqwe yigciwane, abangama-10 958 bengenalo igciwane, nabangama-15 994 isimo sempilo yabo esasingaziwa ngenkathi bebeletha.
Ucwaningo lwathola ukuthi izinga lokufa lwaluyisi-5.8 ngeminyaka yabantu abayi-1 000 (noma ukufa okungama-831 ekuzaleni okuyizi-100 000) ngeminyaka yokuqala yokuzithwala. Izimbangela ezinkulu zokufa kwaba yisandulelangculazi noma ukugula okuthinta isifo sofuba – kokubili ngezinsuku ezingama-42 zokubeletha (amaphesenti angama-53) neminyaka yokuqala yokuzithwala (engamaphesenti angama-62).